Otu dị iche iche - Delta Engineering Belgium
Archive si Atiya "iche"
Pneumatic kalama orienter
Na-ejide karama ahụ (ahụ) n'etiti efere 2 ma gbanwee ya site na iji cylinders.
Na-ejide karama ahụ n'olu, wee gbanwee ha site na iji ọsọ ọsọ dị iche iche.
Nhọrọ: igwefoto dị mma iji chọpụta nhazi nke kalama ahụ & na-arụsi ọrụ ike iji dozie usoro a chọrọ.
Stackable aka grabbing ngwá ọrụ
Ngwaọrụ a na - ewepụ ihe ga - enyere gị aka ijide ihe ejiri tinye ha n’ime igbe kaadiboodu ma ọ bụ hapụ ha ka ha buru onye na - ebu ngwa ngwa.
Wenezde, 19 Ọgọst 2020 by Sara
Ofụri Esịt akpaka, otu isi spout applicator maka rụọ. Ọ dịghị mkpa maka spout unscrambler. A na-ahụ usoro ọhụụ site na sistemu ọhụụ, jidere & tinye ya na robot. Speed: gburugburu 500 - 800 BPH.
Akpadoro n'okpuru: kwụsịrị ahịrị, ịchekwa ohere
Tọzdee, 10 June 2014 by Delta Injinịa
Aka onye tinye ya mee ihe
Ofu ihe eji eme ya n'uzo zuru oke maka karama plastik, na eji aka edoghi ya. Na-ebelata ọrụ ntuziaka na-arụpụta ntakịrị nlọghachi ego na itinye ego. Ọsọ ọsọ: rue 6500 BPH ma ọ bụ 12000 BPH (enwere ike ịgbanye ụta na-emegharị emegharị: 2 x 6500 BPH).
Tọzdee, 23 Eprel 2020 by Cristina Maria Sunea
Akpaka zuru oke, otu isi-onye chọrọ maka karama plastik. Ekele maka usoro okike eji ejigide ya, ị na-ezere jams wdg. Ọsọ: gburugburu 800 - 1200 BPH.
Akpadoro n'okpuru: shrinkage, kwụsịrị ahịrị, karama jam
Tọzdee, 26 Febụwarị 2015 by Delta Injinịa
Ahịrị akpụ unit
Ngalaba a na-enye gị ohere ịme ahịrị nke agba conical, nke pere mpe, karama rọba na akụrụngwa maka mkpọchi ọkpọ. A na-akwụsị karama ọ bụla na onye na-ejide anụ ahụ nke raara onwe ya nye. Enwere ike ịbanye unit ahụ na igwe ndị ọzọ.
Monday, 26 June 2017 by Delta Injinịa
Dust okpu itinye
Ngalaba a na-etinye okpu ájá na olu nke ite / karama. Ọ na - echekwa nkwarụ na - egbochi mmerụ ahụ dị ka uzuzu, ahụhụ, wdg. Ugbo ala isii, nke nwere ike rue 6-50 okpu.
Mọnde, 19 Eprel 2021 by Sara
HMT-1 ™ smart iko
Igwe smart HMT-1 are bụ mbadamba aka na-enweghị aka maka ndị ọrụ ụlọ ọrụ. Ọ bụ a jupụtara na nkume, isi-n'ịnyịnya ngwaọrụ maka ojiji na ulo oru gburugburu.
100% Aka anaghị akwụ ụgwọ: iwu olu. Nwere ike iji ya maka nkwado vidiyo na-akwado vidiyo (si otú a na-ebelata akara ụkwụ njem), igodo akwụkwọ, wdg.
▼dị iche iche